Ifektri yokwakha Pipe Series - China Isakhiwo Pipe Series Abakhiqizi, abahlinzeki
Ipayipi lamanzi ashisayo nabandayo le-PE-RT
Ukuzinza okuhle kakhulu kokushisa nokuqina kwesikhathi eside kokushisa Ipayipi line-homogeneity enhle nokusebenza okuzinzile. Ukufakwa ohlelweni lwamanzi ashisayo kungaqinisekisa ukusetshenziswa kweminyaka engama-50. Ukusebenza okuhle kokucubungula kanye nepayipi lekhwalithi eqinile ye-PE-RT ayidingi ukuhamba ngenqubo yokuxhumanisa, ayidingi ukulawula izinga lokuxhumanisa nokufana, kunezixhumanisi ezimbalwa zokukhiqiza, umkhiqizo uyafana, futhi ikhwalithi uzinzile futhi unokwethenjelwa. Ivumelana nezimo futhi kulula ukuyisebenzisa Ingafakwa ...
Ipayipi lokushisa elikhanyayo le-PE-RT
Induduzo, inhlanzeko kanye nempilo Kushisa bhé kule ndawo ukushisa ukushisa kuyindlela enhle yokushisa. Izinga lokushisa elingaphakathi endlini lifana, futhi izinga lokushisa ekamelweni lincipha kancane kancane ukusuka phansi kuye phezulu, okunika abantu umuzwa omuhle wokufudumeza izinyawo nokupholisa amakhanda abo. Akulula ukudala ukungcoliswa komoya ongcolile. Igumbi lihlanzekile impela, elingathuthukisa ukujikeleza kwegazi lomzimba womuntu futhi likhuthaze imetabolism yomzimba womuntu, ukuze kwakheke indawo eshisayo ehlangabezana ne ...
PVC bushing kagesi
Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi izinto: Bobabili PVC futhi PVC-C izinto zinezici ezinhle ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa futhi ingacishwa ngokushesha emva komlilo. Amandla amakhulu omthelela: Amapayipi kagesi e-PVC angamelana nesisindo esingu-1kg ezingeni lokushisa elingu-0 ° C kanye nomthelela wamandla wokuphakama okungu-2m, okukhombisa ngokuphelele ukusebenza komthelela wokushisa okuphansi kwento, esebenza ngokuphelele kuzidingo zemvelo yokwakha . Ukusebenza kwe-Insulation: Amapayipi wamandla we-PVC angamelana nemithamo ephezulu ngaphezulu ...
Ipayipi lamanzi ashisayo nabandayo le-PP-R
Imikhiqizo yochungechunge lwamapayipi wamanzi ashisayo nabandayo e-PP-R ikhiqizwa ngokuhambisana ngokuqinile nezindinganiso eziphakeme zohlelo lwekhwalithi ye-IS09001. Imikhiqizo ihlangabezana ngokugcwele ne-GB / T18742.1, GB / T18742.2, GB / T18742.3 kanye ne-GB / T17219 yenhlanzeko. Ipayipi lamanzi ashisayo nabandayo le-PP-R lingumkhiqizo omusha osetshenziswa kakhulu emazweni asethuthukile emhlabeni namuhla. Isebenzisa ubuchwepheshe bokuhlangana obufanayo kumaphrojekthi wokuthutha amanzi ashisayo nabandayo. Ukusebenza kwayo okuphelele kwezobuchwepheshe nezinkomba zomnotho ...
Izakhiwo ezinhle kakhulu zomzimba nezamakhemikhali: Amapayipi nokufakwa okwenziwe nge-PVC kuvikela ukugqwala, amandla amakhulu omthelela, nokumelana okuphansi koketshezi (izinga lokugeleza eliphakeme ngama-30% kunamapayipi wensimbi alinganayo we-6). Impilo ende yokuguga (ngokusho kwedatha yokuhlola yoMnyango Wezokwakha, impilo yensizakalo ingama-40-50), iyinto ekahle yokwakha indle kanye nokukhucululwa kwendle yamakhemikhali. Ilula futhi iyasebenza, kulula ukuyifaka: isisindo singu-1/7 kuphela wobubanzi obufanayo bensimbi yensimbi, okuyi-c ...
Gcina izinto zokusetshenziswa nokulahleka okuphansi: Amapayipi we-HDPE nokufakwa kokuxhuma okujwayelekile kwe-hot-melt kungukuxhumeka kwesikhathi esisodwa, futhi okufakwa akukwazi ukusetshenziswa kabusha. Indlela yokuxhuma emgodini ingahlukaniswa, izingxenye namapayipi angasetshenziswa kabusha, kusetshenziswe ngokugcwele izinsiza, konga amandla namandla nezinsizakusebenza ezidingekayo ekusetshenzisweni kwesibili; ngesikhathi senqubo yokufaka, amapayipi e-HDPE axhunywe ngemilomo eyisicaba, ngaphandle kwezingxenye ezigqagqene. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuxhuma, i ...